Accueil > Gazetin'ny nosy > Valala
Rakotra tanteraka ny ilany andrefan’ny nosy
Nanomboka ny volana janoary 2022 dia efa nisy valala tany amin’ny faritra atsimon’ny nosy iny. Nahazo ny faritra atsimo andrefana izany ka isany manahirana ny mpamboly tao amin’ny lemaky Samangoky izay sopitra vary iray lehibe. Niitatra hatrany amin’ny faritr’i Manja izany ka nahazo ny faritra Menabe Manontolo . Tonga hatrany Melaky sy Boina ankehitriny.
Efa tsy hay intsony ny isan’ny andiany amin’izany fa efa maro be. Mbola tsy misy nefa ny fihetsikin’ny fanjakana eo anatrehan’izany rehetra izany. Mbola miandry angidimby hono vao afaka mihetsika nefa ny loza efa tsy azo ialana intsony. Toa ireny tsy misy mpitondra ireny ny firenena raha ity valala ity no resahina.
Tsy maintsy hiitatra aty amin’ny faritra ampovoan-tany ity valala ity aoriana kely ao ka horakotra i Madagasikara manontolo. Inona no ataon’ny ministeran’ny fambolena? Inona no ilana ny BNGRC (birao miady amin’ny loza voajanahary)?
Ity izany no loza faha dimy mitranga amin’izao fanjakana izao taorian’ny haintany sy ny kere tany atsimo, nodimbiasin’ny covid-19, nampian’ny rivo-doza batsirai sy Emnatie. Taorin’izany dia ny ady any Rosia sy Ukraine ary ny fahatongavan’ny valala izao indray. Inona no no loza faha enina sy faha fito hitranga manaraka indray? Hiandrasana vola avy any ivelany indray ve vao hovonoina?